Fiarahamiasa amin’i Frantsa: sambany hisy «La nuit de la lecture» eto amintsika | NewsMada
Fiarahamiasa amin’i Frantsa: sambany hisy «La nuit de la lecture» eto amintsika
Hatreto, mbola tsy misy mahasolo ny vaky boky ! Manomboka ho takona anefa izany noho ny anton-javatra maro. Iray amin’ireny ny tsy fahampian’ny fanentanana… Mandray andraikitra manoloana izany ry zareo ao amin’ny IFM.
Ho gaga ireo mandalo amin’iny anoloan’ny Araben’ny fahaleovantena sy ny manodidina ny Institut français de Madagascar (IFM) iny, rahampitso. Hisy ny hetsika iray, sambany hotanterahina eto amintsika, mandritra io tontolo andro io, raha toa ka efa andiany roa no notanterahina tany Frantsa sy tany amin’ny firenena hafa, talohan’izao.
Sambany tokoa ny hisy eto amintsika ny « La nuit de la lecture », hetsika novolavolaina sy karakarain’ny minisitera frantsay misahana ny kolontsaina. Andiany fahatelo ny amin’ity taona ity, ny any Frantsa sy amin’ny firenen-kafa, raha vao voalohany ny eto Madagasikara. Araka izany anarany izany, fotoana iray hanomezan-danja ny boky sy ny vaky boky io. Toy ny isan-taona, misy ny mpanakanto miahy ny hetsika ka i Bérénice Bejo, mpilalao sarimihetsika fanta-daza, ny amin’ity taona ity. Any ivelany, amin’ny alina no hanatontosana ny hetsika, saingy noho ny fandriampahalemana, tanterahina amin’ny tontolo andro izany, eto amintsika.
Hanomboka amin’ny 10 ora maraina ny fotoana, etsy amin’ny IFM. Hisy ny fiarahana mamaky boky. Anisan’ny ivontoerana iray manan-karena karazana boky (fianarana, boky tantara, fialam-boly, sns) ny IFM. Ho hita amin’io fotoana io avokoa ireny. Tsy mijery fotsiny fa handray anjara mihitsy ireo rehetra tonga eny an-toerana.
Ankoatra izany, hanome aina sy tsy hampamonamonaina ny fanentanana samihafa, toy ny « slam », iarahana amin’i Tagman sy ny namany. Marihina fa ny « slam » dia endrika iray hanehoana ny hakanton’ny teny sy ny soratra. Fotoana ihaonana amin’ny mpanoratra ihany koa ny « La nuit de la lecture ». Anisan’izany i Mahir Guven, i Jules Naudet ary i Folly K. Maimaimpoana avokoa ireo rehetra ireo.